မကြေးမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ, 28 ဇန်နဝါရီ 2015
28 ဇန်နဝါရီ 2015 ဗုဒ္ဓဟူး
24 ဇန်နဝါရီ၊ 2015
မကြေးမုံနဲ့အတူ အမေရိကန်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့လာကြရအောင်ပါ။
15 နိုဝင်ဘာ၊ 2014
How do you relieveadaily, monotonous routine? အပျင်းပြေအောင် ဘာတွေလုပ်လဲ။ Social media – facebook, Instagram, twitter နဲ အပျင်းဖြေလို့ရတယ်။ Social media နဲ ဖန်တီးနိုင်မှု ကို တီထွင်လို့ရတယ်။ ဓာက်ပုံ ခေါင်းစဉ် တွေ အထဲ မှာ hashtags တွေ ထဲ လိုက်...
01 နိုဝင်ဘာ၊ 2014
I haveabig meeting I have to attend today, and I want to dress to impress. I need to power dress. ဒီနေ့ ကြေးမုံတို့ power dressing ၊ ခန့် ညားတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု အကြောင်း ပြောကြရအောင်။ ကြေးမုံ အစည်းအဝေး သွားရမယ်။ Dress to Impress လုပ်ချင်းတယ်။ အထင်ကြီးလေးစား ၊ ယုံကြည်မှုရနှိုတဲ့ အဝတ်အစား...
25 အောက်တိုဘာ၊ 2014
Let’s go to the studio. ကြးမုံ က မနက် အစောကြီး နိုးပြီ ရုံးကို မနက် ၅ နာရီ အရောက် ပြီတော့ ၊ TV ရှို ကို ရိုက်တယ်။ ကြေးမုံ နဲ Studio ကို တူတူ သွားမယ် လေ။ We get up early because the early birds get the worms. မနက် အစောကြီး နိုး တဲ့ ငှက်ကလေးတွေ က တီကောင်များများ ရာတယ်။
18 အောက်တိုဘာ၊ 2014
11 အောက်တိုဘာ၊ 2014
25 သြဂုတ်၊ 2014
မကြေးမုံနဲ့အတူ တိရိစ္ဆာန်ရုံဆီ သွားလည်ရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင်ပါ …
04 သြဂုတ်၊ 2014
မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အစီိအစဉ်
မကြေးမုံနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြရအောင်ပါ …
28 ဇူလိုင်၊ 2014
07 ဇူလိုင်၊ 2014
Spelling Bee လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တနိုင်ငံလုံးအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မြန်မာကျောင်းသား မောင်လွင်မိုးအောင်ကို မကြေးမုံက မေးမြန်းထားတာကို၊ မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရေးအစီအစဉ်မှာ ရှုစားကြည့်ရအောင်ပါ
30 ဇွန်၊ 2014
မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ်ကို ရှုစားနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ်မှာ နယူးယောက်မြို့တော် အကြောင်း ပထမပိုင်းကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ် အစီအစဉ်မှာတော့ နယူးရော့ခ်မြို့ကို Concrete Jungle ဆိုပြီး တင်စားထားပုံကို ပြောပြ ပါမယ်။